“Asi kana mukarega kuzoteerera zvataurwa naTenzi Mwari wenyu, kana kuchengeta mitemo nemirao yandiri kukupai nhasi uno, rushambwa irworwu rwose ruchakutibikirai.
“Ani naani zvake anoti rushambwa ngaruwire baba vake kana amai vake, anofanira kuuraiwa.
Nhai amai we-e zvangu! Chamakandiberekera, ini zvangu munhu wenharo, ini matatapure munyika ino yose. Handina kukweretesa kana kukwereta munhu asi vose vanondirengerera rushambwa.
Asi Kristu nokuva anenge akarengererwa rushambwa akatinunura kurushambwa rwomutemo nokuti muMagwaro Matsvene makanyorwa kuti: “Akarengererwa anorushambwa munhu wose anoturikwa pamuti.”
Anoitira zviuru nezviuru zvavanhu mwoyochena anoregerera zvitadzo, achiregererawo kukanganisa nouipi, asi haamborega zvake munhu anokodzera kurangwa asina kurangwa. Anoranga vana navana vavo, achivarangira zvakaipa zvamadzibaba avo, achitevedza zvizvarwa zvavo, kunyange kusvikira kune chechitatu nechechina.”
‘Imi Tenzi hamukurumidze kushatirwa. Mune mwoyo wakachena. Munoregerera zvitadzo, munoregererawo kukanganisa. Kunyange zvakadaro hamuzorega kuranga vana nezvizukuru pamusana pezvitadzo zvavabereki vavo kusvikira kuchizvarwa chavo chechitatu nechechina.’
Kuna Adhamu, Mwari akati, “Pamusana pokuti wateerera zvako mukadzi wako, ukadya muti wandakati usadye; nyika yapinda rushambwa pamusana pako, chokudya chako kuti uchiwanewo panyika, uchaita chokutamburira upenyu hwako hwose.
Sokubhabhama kunoita shiri uye sokubhururuka kunoita nyenganyenga ndozvakaita kurengerera rushambwa pasina chikonzero, hakubatirire.
Usapfugamire zvifananidzo izvozvo kana kuzvinamata nokuti ini Tenzi Mwari wako ndiri Mwari aneshanje. Ndinoranga vose vanondivenga, shamhu yangu ichirova vana vavo, ndichivarangira zvitadzo zvamadzibaba avo kusvikira kuchizvarwa chavo chechitatu nechechina.
Kristu chaakatisunungurira kuti tive vanhu vakasununguka, nokudaro mirai zvakasimba murege kuzvipinzazve mujoko rouranda.
Usapfugamire zvifananidzo izvozvo kana kuzvinamata nokuti ini Tenzi, Mwari wako ndiri Mwari aneshanje. Ndinoranga vose vanondivenga, shamhu yangu ichirova vana vavo ndichivarangira zvitadzo zvamadzibaba avo kusvikira kuchizvarwa chavo chechitatu nechechina.
 Mambo Dhavhidhi paakasvika kuBhahurimu, akavingwa nomumwe murume wekumhuri yokwaSauro ainzi Shimei mwanakomana waGera. Akanyatsomubudira achimutuka, achikanda matombo kuna Dhavhidhi nokumakurukota ose amambo Dhavhidhi nokuvanhu vose. Izvozvo varwi vehondo vano chaivo vokwamambo vakanga vakamukuta kurudyi nokuruboshwe. Shimei aimutuka achiti, “Iwe! Ibva kuno! Ibva! Mhondi yomunhu! Munhu pasina! Tenzi akatsividza ropa remba yokwaSauro wawakatorera chigaro chokutonga. Tenzi azopa umambo mwanakomana wako Abhusharomu. Yhaa! Wazozviona. Waparara iwe nokuti uri mhondi yomunhu.”
chitunha chake ngachirege kurara usiku hwose chiripo. Chivigei zuva rakarero nokuti munhu anenge aturikwa pamuti anenge ashorwa zvakanyanyisisa, naTenzi. Regai kun'oresa nyika yenyu yamuri kupiwa naTenzi Mwari wenyu kuti ive nhaka yenyu.
 Usapfugamire zvifananidzo izvozvo kana kuzvinamata nokuti ini Tenzi, Mwari wako ndiri Mwari aneshanje. Ndinoranga vose vanondivenga, shamhu yangu ichirova vana vavo ndichivarangira zvitadzo zvamadzibaba avo kusvikira kuchizvarwa chavo chechitatu nechechina. Asi ndinogara ndichiitira mwoyochena kuzviuru nezviuru zvavanondida, vanochengeta mitemo yangu.
MuFirisitia akati kuna Dhavhidhi, “Ndiri mbwa here yaunouya wakabatira shamhu? MuFirisitia akarengerera achishurikidzira Dhavhidhi rushambwa runobva kuna vamwari vake.”
 Mumazuva iwayo vanhu vacharega kutaura muromo wokuti: “Madzibaba akadya magirepisi anovava, nezvo vana vaita ugugu mumazino. “Asi kutoti munhu wose anofanira kufira chitadzo chake, nyakudya magirepisi anovava ndiye ane mazino achaita ugugu.
Asi ndinogara ndichiitira mwoyochena kuzviuru nezviuru zvavanondida, vanochengeta mitemo yangu.
 Aiwa muna zvose izvi tiri vakundi vokutopfuuridza nokuna iye akatida nokuti ndine chokwadi chokuti hapana rufu kana upenyu kana vatumwa kana vano ukuru ukuru kana zvinhu zviripo iye zvino kana zvichauya kana masimba, kana urefu kana kukwira mudenga kana udziki pasi kana chimwe zvacho muzvisikwa zvose chinogona kutiparadzanisa norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Tenzi wedu.
 Garai makagadzikana makarindira, mhandu yenyu Satani anobvongodza kose kose seshumba inodzvova ichitsvaka waingadye. Murwisei, makasimba muchitendero chenyu, muchiziva kuti kutambudzika kumwecheteko kunofanira kutirirwa nevehama pasi pose.
 Kuna Adhamu, Mwari akati, “Pamusana pokuti wateerera zvako mukadzi wako, ukadya muti wandakati usadye; nyika yapinda rushambwa pamusana pako, chokudya chako kuti uchiwanewo panyika, uchaita chokutamburira upenyu hwako hwose. Nyika ichamera minzwa norukato. Iwe uchadya zvokudya zvomusango. Chokudya chako chichava chedikita kudzamara wadzokera muvhu, nokuti wakabva kuivhu, uri vhu, uchadzokerazve kuivhu.”
 Mwari akati, “Ko izvozvi uri kuti waiteiko? Ropa romunun'una wako radeukira pasi, riri kuchema kwandiri. Chinzwa, wapinda rushambwa rwokudzingwa munyika ino yashama muromo wayo ikanwa ropa romunun'una wako rawadeura, iyewe noruoko rwako. Kana ukarima, nyika hapana chainokupa. Uchava swerakuenda nomudzungairi panyika.”
 Vanakomana vaNowa vakabuda mungarava ndiShemu naHamu naJafeti. Hamu ndiye baba vaKanani. Ivava ndivo vanakomana vatatu vaNowa. Kwavari ivava ndiko kwakazobva vanhu vose vari panyika pano. Nowa aiva murimi akasima munda wemagirepisi. Akanwa waini akararadza akarara mutendhe rake asina kupfeka. Hamu baba waKanani akaonerera baba wake asina kupfeka, akandoudza mukoma nomunun'una wake panze. Shemu naJafeti vakatora nguwo vakaisumudza kusvika pamapfudzi avo vose vari vaviri, vakadududza namakotsi vakasvikofukidza baba vavo vakatarisa rutivi, saka havana kutarisa baba vavo vakanga vasina kupfeka. Nowa paakapengenuka mukuraradza newaini, akaziva zvakanga zvaitwa kwaari nomwanakomana wake muduku. Akati, “Kanani ngaawirwe norushambwa, ngaave muranda chaiye wokupedzesera kuvakoma navanun'una vake.” Akatiwo, “Ngaarumbidzwe Tenzi Mwari waShemu, Kanani ngaave muranda waShemu. Mwari ngaakudziridze Jafeti, ngaagare mumatendhe aShemu, Kanani ave muranda wake.”
 Tenzi achaita kuti ropa raakadeura rimupfukire iye akauraya nebakatwa vanhu vaviri vakarurama kupinda iye vaitova nani pana iye vanaAbhuneru mwanakomana waNeru mutungamiriri wehondo yevokwaIsiraeri, naAmasa mwanakomana waJeteru mutungamiriri wehondo yokwaJudha uyezve akazviita baba vangu Dhavhidhi vasingazvizivi. Imomo ropa ravo richapfukira Joabhu nezvizvarwa zvake nokusingaperi asi kuna Dhavhidhi nezvizvarwa zvake nokumhuri yake noumambo hwokwake kuve norugare runobva kuna Tenzi narini wose.” Saizvozvo Bhenaya mwanakomana waJehoyadha akakwirako akamuuraya akafa. Akavigwa kumusha kwake kurenje. Mambo akaisa Bhenaya mwana waJehoyadha pakutungamirira hondo panzvimbo paJoabhu, akaisawo mupristi Zadhoki panzvimbo paAbhiyatari. Mambo akatumira shoko rokuti Shimei auye akamuti, “Zvivakire imba muJerusaremu muno ugare imomo usambobva zvako ipapo uchienda kumwe. Zvichazoitika ndezvizvi zvokuti zuva rauchabva ipapo uchiyambuka kakova keKidhironi nyatsoziva zvako kuti chako iwe kufa, rufu rwako nderwokuzviparira.” Shimei akadaira kuna mambo achiti, “Zvamareva zvakanaka. Ini muranda wenyu ndichaita sokureva kwenyu mambo changamire.” Saizvozvo Shimei akagara muJerusaremu kwenguva ndefu. Mushure memakore matatu zvakazongoitikawo kuti vamwe varanda vaShimei vaviri vakatizira kuGati kuna mambo Akishi mwanakomana waMaaka. Shimei paakazvitaurirwa kuti, “Inga varanda venyu vari kuGati.” Shimei akasimuka akasunga dongi rake akaenda kuGati kuna Akishi kundotsvaka varanda vake. Shimei akasvikotora varanda vake kuGati akadzoka navo. Pazvakasvitswa munzeve dzaSoromoni kuti Shimei akambobva muJerusaremu akatoenda kuGati akadzoka, mambo akatumira shoko rokuti Shimei auye, akati kwaari, “Handina here kuti upike naTenzi ndikanyatsokudurira kuti pazuva raunongobuda uchienda kupi zvako unofanira kunyatsoziva kuti chako iwe kufa? Iwe ukandipindura uchiti zvamareva zvakanaka ndichateerera. Zvino wakaregererei kuchengeta mhiko yawakapika naTenzi nomutemo wandakakupa?” Mambo akatiwo kuna Shimei, “Handiti mumwoyo uri kutoziva zvakaipa zvose zvawakaitira baba wangu Dhavhidhi. Zvino Tenzi achaita kuti uipi hwako hukupfukire. Asi mambo Soromoni achakomborerwa, umambo hwokwaDhavhidhi huchadzikiswa midzi naTenzi narini wose.” Mambo akamutumira Bhenaya mwana waJehoyadha, akabuda akamuuraya akafa. Naizvozvo umambo hwakabva hwanyatsova chaizvo mumaoko aSoromoni.
Mudzimai wake akamuti, “Mucharamba makangoomererana noururami hwenyu here? Dai matoshonha zvenyu Mwari mufe.”
Kamweya kandava nako kava kunhuwa kumudzimai wangu, ndava kusemesa kuvana vamai vangu chaivo.
Handiti makamutenderedza norumhanda iye nemba yake uye zvose zvaanazvo kumativi ose? Makakomborera basa raanoita namaoko ake. Makaita kuti zvinhu zvake zviwande panyika.
 Pokupedzisira itosimbai muna Tenzi uye nokusimbarara kwesimba rake. Pfekai zvose zvokurwisa nazvo zvaMwari kuti mukwanise kumirisana namazano akaipa aDhiabhori nokuti hatisi kurwisana navanhu asi nomweya ine ukuru ukuru, neino ushe nemweya inotonga pasi pose pano pane rima riripo iri uye tiri kurwisana nehondo nehondo dzomweya youipi iri mumatenga'mu. Naizvozvo torai zvose zvokurwisa nazvo zvaMwari kuti mukwanise kumira pazuva iroro rinenge rakaipa. Kana marwisa zvakaomarara zvazvo kudaro imi mucharamba makamira. Saizvozvo mirai makazvisunga zviuno zvenyu nechokwadi sebhande makapfeka demautare rapaditi rokururama. Mutsoka dzenyu pfekai shangu dzokuda kuparidza Shoko Rakanaka rorugare uyewo garai nguva dzose makabata nhoo yechitendero yamunogona kudzima nayo miseve yose yomoto yewakaipa. Dzikai mumusoro ruponeso senguwani muine bakatwa raMweya zvichireva Shoko raMwari.
Akati, “Kanani ngaawirwe norushambwa, ngaave muranda chaiye wokupedzesera kuvakoma navanun'una vake.”